China Pu ntekwasa ígwè waya eriri factory na-emepụta | Bangyi
Ka ọ dị ugbu a, ụdọ eriri waya plastik a na - ejikarị eme ihe bụ: PU ejiri igwe na - eji eriri igwe eji eme ihe na PVC. Aha PU zuru ezu bụ polyurethane. Tụnyere PVC ntekwasa ígwè waya eriri, ọ nwere ezi mmanụ na-eguzogide, ike, abrasion eguzogide, merela agadi na-eguzogide na adhesion;
Ka ọ dị ugbu a, ụdọ eriri waya plastik a na - ejikarị eme ihe bụ: PU ejiri igwe na - eji eriri igwe eji eme ihe na PVC.
Aha PU zuru ezu bụ polyurethane. Tụnyere PVC ntekwasa ígwè waya eriri, ọ nwere ezi mmanụ na-eguzogide, ike, abrasion eguzogide, merela agadi na-eguzogide na adhesion; na price bụ dịtụ elu, na ọ bụ adabara ahịa na elu chọrọ maka ngwaahịa ike na abrasion eguzogide.
Pu ntekwasa Steel Waya eriri na-ọtụtụ-eji mgbatị Gịnị, cannery edoghi, saa akara, kọmputa nche Gịnị, igbachi USB usoro, catenary usoro, ụgbọ ala akara akara, horticultural ngwa, jumping eriri, spring waya eriri, guardrail ngwa.
Anyị factory, Plastic ntekwasa ígwè waya eriri ịmụta n'ụzọ zuru ezu akpaka mmepụta akụrụngwa. Nzọụkwụ mbụ bụ iji kechie mkpuchi plastik na eriri waya. Mgbe ahụ, a na-enyocha eriri ahụ site na sistemụ arụmọrụ na-akpaghị aka n'ụzọ zuru ezu iji hụ na a na-agbanye eriri waya plastik na-eyikwasị ma nwee otu dayameta. Mgbe obi jụrụ na akara ahụ, ọ na-enweta nyocha dị mma n'ikpeazụ. mgbe ahụ juru na a n'ụzọ zuru ezu akpaka baler iji wuchaa dum mmepụta usoro, ma ọ bụ na-abanye na akpaka ọnwụ usoro bee n'ime obere size.
Aha ngwaahịa Pu ntekwasa ígwè waya eriri
Ihe onwunwe Eriri waya waya: ígwè galvanized / igwe anaghị agba 316/304/201,Ihe mkpuchi ： PU
Elu nkeEriri waya waya na-ekpo ọkụ tinye kpaliri, electro kpaliri, egbu maramara, mmanụ ntekwasa, wdg
agba Piel, green, odo, ọbara ọbara, nwa, acha anụnụ anụnụ, odo odo, wdg.
Ewu nkeEriri waya waya 1 * 7/7 7 7/7 7 19/19 19, wdg.
Ngwa Craftgbọelu ụgbọelu; Automobile ipigide USB, Control Gịnị; Telecommunication, Elevators, kpara waya sieve, handicraft, waya
ịbịaru, ngwa eletriki ụlọ na akụrụngwa, elekere na elele anya, akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa akụrụngwa, wdg.
Dayameta nke na-ewu ewu
Nhazi Dia tupu mkpuchi (mm) Dia mgbe mkpuchi (mm) Arọ / 100m (n'arọ) BL (Kn)
7 × 7 0.8 1.00 0.32 0,53
7 × 7 1.50 Ugboro abụọ 1.20 1.27
7 × 7 Ugboro abụọ Ugboro abụọ 1.96 Ugboro abụọ
7 × 7 Ugboro abụọ 3.00 Ugboro abụọ Ugboro abụọ
7 × 7 3.00 4.00 5.00 Ogbe 3.52
7 × 19 4.00 5.00 Ogbe 8 8.33
7 × 19 6.00 Ugboro abụọ 19.84 18.76
7 × 19 Ugboro abụọ Igba 10.00 32.81 33.35
Nke gara aga: Plastic ntekwasa ígwè waya eriri
Osote: Cokwanyere ntekwasa ígwè waya eriri
Naịlọn ntekwasa Steel Waya eriri
Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri
Cokwanyere ntekwasa Steel Waya eriri
Electro kpaliri Steel Waya eriri, Eriri igwe anaghị agba nchara Waya eriri, China rụpụta kpaliri Steel Waya eriri, Vkwanyere ntekwasa kpaliri Steel Waya eriri, Steel Waya eriri kpaliri, Igwe anaghị agba nchara Waya eriri ịkwanyere ntekwasa,